Cofttek News - Cuntooyinka kaabista ah ee cuntada ka samaysan
Kadib daraasad-2019-ka ah oo la soo gabagabeeyay in Nicotinamide Mononucleotide ay ammaan u tahay isticmaalka aadanaha haddii isticmaalkeedu uu ku xaddidan yahay xadka loo qoondeeyay, dhowr shirkado wax soo saar ayaa suuqa la soo galay waxyaabaha ay bixiyaan. Xulashada xad dhaafka ah ee doorashada ayaa ka dhigtay dadka wax iibsanaya inay ku jahwareersan yihiin nooca Nictonimade Mononucleotide (NMN) ee iyaga ugu fiican Fikradeena, waxa ugu fiican ee ka hortagga gabowga ee Nico ...
Haddii aad raadinayso dheeri Magnesium L-Threonate oo wanaagsan, waxaan kugula talineynaa inaad ka iibsato budada Magnesium Threonate ee Cofttek. Shirkaddu waxay ku andacoonaysaa inay kor u qaadayso bioavailability ee magnesium jirka. Shirkaddu waxay sidoo kale sheeganeysaa in budada ay bixiso shirkadu ay taageerto shaqada xusuusta iyo kor u qaadida guud ahaan shaqada garashada. Waxay kaloo ka caawiyaan dadka isticmaala inay si fiican u seexdaan. Cofttek waa alaab-qeybiyeyaal Magnesium L-Threonate oo...
Haddii aad raadineyso budo tayo sare leh Palmitoylethanolamide (PEA) iib ah, markaa waxaad joogtaa meesha saxda ah. Waxaan nahay mid ka mid ah kuwa ugu caansan, aqoonta leh, khibradna u leh soo-saarista Palmitoylethanolamide (PEA) ee Shiinaha. Waxaan bixinnaa alaab saafi ah oo si fiican loo soo baakadeeyay kuwaas oo had iyo jeer ay baaraan sheybaar heer caalami ah oo heer caalami ah si loo hubiyo nadiifnimada iyo badbaadada. Waxaan had iyo jeer bixinaa amarro ka socda Mareykanka, Yurub, ...